ISpain ikhokelela kwiintlawulo "ezingenakunxibelelana" ngexesha lokuhlawulwa kweselfowuni | Iindaba zeGajethi
ISpain ikhokelela kwintlawulo yokunxibelelana ngexesha lokuhlawula
I-Apple Pay, i-Samsung Pay, iBizzum ... ngokuqinisekileyo ngoku sele lixesha lokuhlawula ngokukhawulezaAsinalo ixesha okanye umnqweno wokuphulukana nomsebenzi osichaphazelayo ngokwezoqoqosho, ayikho enye into ngaphandle kokwenza iintlawulo. Ngakumbi eSpain, ilizwe apho kude kube kutshanje yayisisithethe esendeleyo ukubonisa (kunye nokucela) i-DNI ukuqinisekisa ubungqina bomsebenzisi wekhadi letyala. Le yindlela ezakhawuleza ngayo iibhanki ezininzi zaseSpain ukubonelela ngenkqubo yeNFC.
Ngale ndlela, ISpain ibe, ngaphandle kwesiko lethu lokuziqhelanisa nobunzima kuphuhliso lobuchwephesha, ilizwe laseYurophu elinelona zinga liphezulu lentlawulo ngaphandle konxibelelwano. Iindaba ezimnandi zigxininisa ukuba sililizwe ngokwesiko elibaphephayo ubuchwepheshe obutsha kwiindawo ezininzi.
Iqela le Osborne clarke Uqhubekile nophando olutyhila inyani yokuba ama-57% abantu baseSpain basebenzisa amakhadi angaqhagamshelwa, ke ukuthunyelwa ngamashishini ebhanki kuye kwanele kwaye kusebenza ngokufanelekileyo ngaxeshanye. Ngeli xesha sifumana inani eliphakamileyo kakhulu kune-avareji yaseYurophu, eyi-45%. Njengokuba ayinakuba yenye indlela, ukuqinisekisa impumelelo yokunxibelelana namakhadi etyala kunye namakhadi okuthenga ngedatha kunyanzelekile ukuba amashishini avumelane nokufakwa kweedatha eziguqulweyo, enye inkalo apho iSpain ikhokela iYurophu ngokophando lweVISA olumisela ukuba yintoniKukho malunga ne-820.000 yeetheminali zokunxibelelana kulo lonke elaseSpain, ngokubonelela ngo-2020 onke amashishini amkela iintlawulo zamakhadi ezibandakanya.
Le yindlela i-NFC kumakhadi azo zonke iintlobo eyenze ngokulula ngayo indlela yayo, nangona ezi ziqwenga zeplastikhi mhlawumbi zimiselwe ukuba zithathelwe indawo ziintlawulo ezihambayo kunye nombulelo ongabanjwanga kwiinkonzo ezinje I-Apple Pay, ethi ngendlela eyahlukileyo, ibhengeze i-Caixa Bank phakathi kwababoneleli abatsha ngaphambi kokuphela kwe-2017.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » ISpain ikhokelela kwintlawulo yokunxibelelana ngexesha lokuhlawula
Izinto ezingaqhelekanga 2: "Akukho nto iya kuphinda ifane ... Akukho nto"